Dhadhaab, Kenya: “Immisa dhibaato oo kale ayaa ay nagu qaadaneysaa ka hor inta aanan bilaabin in aan xal raadinno?” - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Dhadhaab, Kenya: “Immisa dhibaato oo kale ayaa ay nagu qaadaneysaa ka hor inta aanan bilaabin in aan xal raadinno?”
14.06.2012 | General
Dhadhaab/Nayroobi, 14 Juunyo 2012 – Khamiista 14 Juunyo, ka hor MaalintaQaxootiga Adduunka, ururka caalamiga ah ee arrimaha bani’aadamnimada MédecinsSans Frontières (MSF) waxaa uu daaha ka rogayaa buugga magaciisu yahay Out of Somalia, buuggaas oo ku saabsannolosha xerada qaxootiga ee ugu ballaaran adduunka sida ay ugu muuqato laba
qoraa oo qora sheekooyinka maadda ah. MSF waxaa ay sidoo kale qaban doontaamunaasabad ay kuwa ugu muhiimsan ee ay khuseyso iyo saxaafadda ay kagamunaaqashoonayaan mustaqbalka Dhadhaab.
Dhadhaab hadda waxaa ku nool dad ka badan kuwa ku nool Nakuru, magaalada afaraad ee ugu weyn Kenya. In kasta oo bilihii dhowaa ay ka hoos baxdey ajandaha wararka, haddana xaaladda nus-milyanka qaxootiga ah ee ku nool Dhadhaab weli waa mid quus taagan.
Cusbitaalka MSF ee Dhagaxleey – oo ah mid ka mid ah shanta xero ee la isku yiraahdo Dhadhaab – shaqaaluhu waxaa ay bishiiba sameeyaan celcelis ahaan 14,000 la-talin caafimaad ah. Bilihii dhowaa waxaa jirey jadeeco iyo daacuun dillaacay, waxaana kordheysa tirada dadka qabo qaaxada daawooyinka badan u adkeysata. Intaa waxaa u sii dheer, ammaanka ayaa sii xumaadey, diiwaangelintii qaxootiga cusubna waa la joojiyey siddeeddii bilood ee la soo dhaafey. Iyada oo la wajahayo xaqiiqdan, waxaa cad in in xerooyinka sida ay hadda yihiin lagu sii hayo 20 sano oo kale ma aha mid la qaadan karo. Haddaba maxay tahay midda tan beddelka u noqon karta?
“Immisa dhibaato oo nafaqo ama jadeeco safmar ah oo kale ayaa ay naga qaadaneysaa ka hor inta aanan bilaabin raadinta xalka?” ayaa aytiri Dr Elena Velilla oo ka tirsan MSF.” Qaxootiga ku jira Dhadhaab waxaa haysta labada culeys oo kala ah xaaladaha liita ee ka jira xerooyinka dadku ku tiro badan yihiin oo dhinac ah, iyo dal ku maqnaansho aan weligeed dhammaan oo dhinaca kale ah. Labaatan sano ka dib markii xerooyinka la furey, waxaa ay u eg tahay in taariikhdu ay soo laba noqoneyso. Waxaa cad in loo baahan yahay in wax laga beddelo qaabka xerada.”
Dadka caanka ah ee ka qaybqaadan doona munaaqashooyinka khubarrada waxaa ka mid ah: Mr Badu S Katelo, oo ka
Socda Guddiga Arrimaha Qaxootiga ee Wasaaradda Socdaalka iyo Diiwaangelinta
Dadka; Mr Abel Mbilinyi, Ku-xigeenkaWakiilka UNHCR ee Dalka; Mr Bare Osman
Abdi, Guddoomiye-ku-xigeenka Dhallinyarada Dhagaxley; Ms Kellie Leeson, Agaasimaha Dalka ee hay’adda International Rescue
Committee (IRC); iyo Dr Elena Velilla,
Madaxa Ergada Médecins Sans Frontières (MSF).
Médecins Sans Frontières/DhakhaatiirtaAan Xuduudda Lahayn (MSF) waa urur aan faa’iido doon ahayn, oo aan dowli ahayn. Waxaa uu gargaar madax-bannaan, oo dhexdhexaad ah uu in ka badan 60 dal uu ku siiyaa dad badbaadadoodu ay halis geliyeen rabshad, dayacaad ama masiibo, taas oo aasaasiyan ka dhalata iskahorimaad hubeysan, cudurro safmar ah, nafaqo-xumo,dad laga hor istaagey gargaarka caafimaadka iyo masiibooyin dabiici ah.
Bishii Oktoobar2011, laba shaqaalaha gargaarka ee MSF ka tirsan, Montserrat Serra iyo Blanca Thiebaut, ayaa
laga afduubey xerada qaxootiga ee Dhadhaab ee waqooyiga Kenya ku taalla iyagaoo gargaar degdeg ah siinaya dadka Soomaaliyeed. Ilaa hadda waa la haystaa,waxaana MSF, in kasta oo ay sii waddo wax ka qabashada dhibaatooyinka ba’an, ayhakisey in mashruuc aan degdeg ahayn ka furto Soomaaliya ilaa laga sii daayo.
Qoraalada kale ee ku saabsan General